Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » I-China eKhokela iNdlela ngoQoqosho lweGlobal Green
Ekuqaleni kuka-Okthobha, iNgxowa-mali yeHlabathi yezeMali, kwiNjongo yoQoqosho lweHlabathi, yalungisa uqikelelo lwayo lokukhula kwehlabathi luka-2021 lwaya kutsho kumyinge we-5.9 ekhulwini yaze yalumkisa ngokungaqiniseki okuphakamileyo kokuchacha koqoqosho.
Ngokuchasene nemeko enjalo, iinkokeli zezoqoqosho ezinkulu ezingama-20 zadibana e-Italiya eRoma ngoMgqibelo zizama ukwenza iqonga lamazwe ngamazwe lisebenze kwakhona - njengoko lenzayo xa babebambe iindibano ezimbini ngonyaka emva kokudodobala kwezimali kwehlabathi ngo-2008.
I-China, eyona njini yohlumo ibalulekileyo kuqoqosho lwehlabathi, iqaqambise intsebenziswano, ubandakanyo kunye nophuhliso lohlaza kwiNgqungquthela ye-16 yeeNkokheli zeQela lama-20 (i-G20).
Intsebenziswano ngokuchasene nobhubhane
Njengoko i-COVID-19 isawonakalisa umhlaba, intsebenziswano yogonyo lwehlabathi yabekwa phambili nguMongameli waseTshayina uXi Jinping xa wayesenza intetho yakhe ngevidiyo kwiseshoni yokuqala yengqungquthela.
Ucebise ngenyathelo le-Global Vaccine Cooperation Action Initiative enamanqaku amathandathu egxile kwintsebenziswano yesitofu se-R&D, ukusasazwa ngokufanelekileyo kwezitofu, ukurhoxisa amalungelo obunini-mveliso kugonyo lwe-COVID-19, urhwebo olugudileyo kwizitofu zokugonya, ukuqondwa ngokufanayo kwamayeza kunye nenkxaso yemali yentsebenziswano yesitofu sokugonya kwihlabathi liphela. .
Ukungalingani kulwabiwo lwesitofu sokugonya kugqamile, amazwe anengeniso ephantsi afumana ngaphantsi kwe-0.5 yepesenti yelizwe lonke kwaye ngaphantsi kwe-5 yepesenti yabemi base-Afrika bagonywe ngokupheleleyo, ngokutsho koMbutho wezeMpilo weHlabathi (i-WHO).
I-WHO imisele izinto ezimbini ekujoliswe kuzo ukujongana nobhubhane: ukugonya ubuncinci i-40 yepesenti yabemi behlabathi ekupheleni kwalo nyaka kwaye inyuse iye kuma-70 epesenti phakathi ku-2022.
"I-China ikulungele ukusebenzisana nawo onke amaqela ukunyusa ukufikeleleka kunye nokufikeleleka kwezitofu kumazwe asaphuhlayo kunye nokwenza igalelo elihle ekwakheni umgca wokukhusela ugonyo lwehlabathi," utshilo u-Xi.
I-China ibonelele ngaphezulu kwe-1.6 yeebhiliyoni zeedosi zezitofu kumazwe angaphezu kwe-100 kunye nemibutho yezizwe ngezizwe ukuza kuthi ga ngoku. Lilonke, i-China iya kubonelela ngeedosi ezingaphezulu kwe-2 yeebhiliyoni zehlabathi kunyaka wonke, wongeze watsho, ephawula ukuba i-China iqhuba imveliso yogonyo oludibeneyo kunye namazwe ali-16.
Ukwakha uqoqosho lwehlabathi oluvulekileyo
Ekukhuthazeni ukubuyiswa koqoqosho, umongameli wagxininisa ukuba i-G20 kufuneka ibeke phambili uphuhliso kuququzelelo lomgaqo-nkqubo omkhulu, ibiza ukwenza uphuhliso lwehlabathi lulingane ngakumbi, lusebenze kwaye lubandakanyeke ukuqinisekisa ukuba akukho lizwe liya kusala ngasemva.
“Uqoqosho oluphucukileyo kufuneka lufezekise izithembiso zalo kuncedo lophuhliso olusemthethweni kwaye lubonelele ngemithombo yobutyebi kumazwe asakhasayo,” utshilo uXi.
Ukwamkele intatho-nxaxheba esebenzayo yamazwe amaninzi kwiPhulo loPhuhliso lweHlabathi.
Kungekudala, ucebise i-Global Development Initiative kwiZizwe eziManyeneyo kwaye wacela uluntu lwamazwe ngamazwe ukuba luqinise intsebenziswano kwimimandla yokunciphisa intlupheko, ukhuseleko lokutya, impendulo ye-COVID-19 kunye nogonyo, inkxaso-mali yophuhliso, utshintsho lwemozulu kunye nophuhliso lohlaza, ushishino, uqoqosho lwedijithali kunye noqhagamshelwano.
Eli nyathelo lihambelana kakhulu nenjongo yeG20 kunye nokubaluleka kokukhuthaza uphuhliso lwehlabathi, utshilo uXi.
Ukubambelela kuphuhliso lohlaza
Okwangoku, ukujongana nokutshintsha kwemozulu kuphezulu kwi-ajenda yehlabathi njengoko iseshoni ye-26 yeNkomfa yamaQela (i-COP26) kwiNgqungquthela ye-UN yoTshintsho lweMozulu iya kuvulwa ngeCawa eGlasgow, eSkotlani.
Kulo mxholo, uXi ubongoze amazwe aphuhlileyo ukuba abe ngumzekelo ekunciphiseni ukukhutshwa kwegesi, esithi amazwe kufuneka athathele ingqalelo ngokupheleleyo ubunzima obukhethekileyo kunye neenkxalabo zamazwe asakhulayo, afezekise izibophelelo zawo zenkxaso-mali yemozulu, kwaye abonelele ngetekhnoloji, ukwakhiwa kwezakhono kunye nenye inkxaso. ukuphuhlisa amazwe.
“Oku kubaluleke kakhulu kwimpumelelo yeCOP26 ezayo,” utshilo.
U-Xi, ngamaxesha amaninzi, uye wagxininisa imbono ye-China kulawulo lwemozulu yehlabathi kwaye wavakalisa inkxaso eqinileyo yase-China kwiSivumelwano saseParis, eququzelela inkqubela phambili enkulu kwinqanaba lehlabathi.
Ngo-2015, u-Xi wenze intetho ephambili kwiNkomfa yaseParis malunga noTshintsho lweMozulu, esenza igalelo eliyimbali ekuqukunjelweni kweSivumelwano saseParis malunga nesenzo semozulu yehlabathi emva kowama-2020.
Ekuqaleni kwale nyanga, ugxininise iinzame zokufikelela kwincopho yekhabhoni ekujoliswe kuyo kunye nokungathathi hlangothi xa ebethetha ngengqungquthela yeenkokeli kwintlanganiso ye-15 yeNkomfa yamaQela kwiNgqungquthela yeBiological Diversity.
Ingqungquthela ye-G20 kulo nyaka ibibanjwe kwi-intanethi nangaphandle kwe-intanethi phantsi kwe-Ofisi kaMongameli wase-Italiya, igxile kweyona mingeni icinezelayo yehlabathi, nemiba enxulumene nobhubhani we-COVID-19, utshintsho lwemozulu kunye nokuchacha koqoqosho okuphambili kwi-ajenda.
Yayilwa ngo-1999, iG20 equka amazwe ali-19 kunye neManyano yaseYurophu, lelona qonga liphambili lentsebenziswano yamazwe ngamazwe kwimiba yezemali noqoqosho.
Eli qela lithatha malunga nesibini kwisithathu sabemi behlabathi, ngaphezulu kwama-80 epesenti yeGross Domestic Product kunye nama-75 epesenti yorhwebo lwehlabathi.